Dhaqdhaqaaqa heshiisyada safarka iyo dalxiiska ayaa hoos u dhacay ku dhawaad ​​7% bishii Luulyo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » Dhaqdhaqaaqa heshiisyada safarka iyo dalxiiska ayaa hoos u dhacay ku dhawaad ​​7% bishii Luulyo
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dhaqdhaqaaqa heshiisku wuxuu ku sii jiray heer isku mid ah suuqyada muhiimka ah sida USA, UK iyo China, halka Hindiya iyo Australia ay goobjoog ka ahaayeen horumar xagga dhaqdhaqaaqa heshiiska.
Dhaqdhaqaaqa heshiiska ee qaybta socdaalka iyo dalxiiska ayaa weli ah mid aan is -waafaqsanayn.
Bisha Juun waxay muujisay xoogaa calaamado ah soo kabasho kadib hoos u dhac dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Dib -u -soo -noqoshada dhaqdhaqaaqa heshiiska lama sii wadi karo muddo dheer.
Wadar ahaan 69 heshiisyo (oo ka kooban isku -darka & iibsiga [M&A], sinnaanta gaarka loo leeyahay, iyo maalgelinta ganacsiga) ayaa lagu dhawaaqay qaybta socdaalka iyo dalxiiska adduunka intii lagu jiray Luulyo 2021, taas oo ah hoos u dhac 6.8% ka badan 74 heshiis oo lagu dhawaaqay bishii hore.
Dhaqdhaqaaqa heshiiska ee qaybta socdaalka iyo dalxiiska ayaa weli ah mid aan is -waafaqsanayn. In kasta oo bishii Juun ay muujisay calaamado soo kabasho ka dib hoos u dhac ku yimid bilihii la soo dhaafay, dib -u -soo -noqoshada dhaqdhaqaaqa heshiiska lama sii wadi karo muddo dheer iyadoo Luulyo ay mar kale dib u rogtay isbeddelka. Tan waxaa loo aanayn karaa xannibaadaha socdaalka ee jira iyo xaaladaha suuqyada ee aan fiicnayn ee qaybta waddamada qaarkood.
Ku dhawaaqista sinnaanta gaarka ah iyo heshiisyada M&A waxay hoos u dhacday 58.3% iyo 4.7% intii lagu jiray bishii Luulyo marka la barbar dhigo bishii hore, siday u kala horreeyaan, halka tirada maalgelinta hawl -maalmeedku ay diiwaan -gelisay koror ah 21.1%.
Dhaqdhaqaaqa heshiisku wuxuu ku sii jiray heer isku mid ah suuqyada muhiimka ah sida kuwa USA, Ingiriiska iyo Shiinaha, halka Hindiya iyo Australia ay goob joog ka ahaayeen horumar xagga dhaqdhaqaaqa heshiiska. Dhanka kale, Germany, Spain iyo the Netherlands waxay la kulantay hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqa heshiiska bishii Luulyo marka loo eego bishii hore.